သင့်ကုမ္ပဏီအလိုက် သင့်ဆဲလ်ဖုန်းကို အားပြန်သွင်းနည်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆက်သွယ်ရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကမ္ဘာတစ်ခုတွင် နေထိုင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွန်ပျူတာများ၊ တက်ဘလက်များနှင့် အထူးသဖြင့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများမှတဆင့် အမြဲချိတ်ဆက်နေပါသည်။
လူများစွာသည် ကြိုတင်ငွေပေးအင်တာနက်နှုန်းထားကို ငှားရမ်းလိုကြပြီး အချို့က ၎င်းတို့၏ လက်ကျန်ငွေကို အခါအားလျော်စွာ အရစ်ကျဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ အားပြန်သွင်းခြင်းသည် လူတိုင်းအတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများသည် သင့်အား မိုဘိုင်းအားပြန်သွင်းရန် မတူညီသောနည်းလမ်းများကို ပေးဆောင်သည်၊ သင်သည် သင်၏မိုဘိုင်းလ်လက်ကျန်ငွေအား အွန်လိုင်း၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော အေးဂျင့်များသို့သွားခြင်းဖြင့် သင့်အား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
စပိန်ပြည်တွင်းရှိ အဓိကကုမ္ပဏီများ၏ ဖုန်းအားပြန်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ အရာအားလုံးကို သင့်အား ပြောပြပါသည်။
လက်ရှိတွင်၊ သင့်အိမ်၏ သက်တောင့်သက်သာရှိမှု သို့မဟုတ် အလုပ်တွင် အင်တာနက်သုံးနိုင်သော ကွန်ပျူတာအကူအညီဖြင့် သင့်မိုဘိုင်းလက်ကျန်ငွေကို ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီအများစုသည် သင့်အား စပိန်တွင်သာမက ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း သင်၏မိုဘိုင်းအားပြန်သွင်းမှုကို ဤနည်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲခွင့်ပြုသည်။
မိုဘိုင်းလ်အွန်လိုင်းအားပြန်သွင်းရန် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အလွန်လွယ်ကူသည်၊ မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့သွားကာ ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးပြီး အားပြန်သွင်းရန် လက်ကျန်ငွေကို နှိပ်ရုံသာဖြစ်သည်။
ဤစနစ်ဖြင့်၊ သင်သည် ပို၍အရေးကြီးသောကိစ္စများတွင် သုံးနိုင်သည့်အချိန်များစွာကို ချွေတာခြင်း၏အားသာချက်ရှိသည်။
သင့်မိုဘိုင်းမှ သင့်လက်ကျန်ငွေကိုလည်း ငွေဖြည့်နိုင်ပါသည်။ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သော ကွန်ပျူတာတစ်လုံးသာ ရှိသင့်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အပလီကေးရှင်းသည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး iOS (App Store တွင်) နှင့် Android (Google Play တွင်)၊ ၎င်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး သင့်ဖုန်းကို သင်အလိုရှိတိုင်း အားပြန်သွင်းနိုင်သည်။
ငွေဖြည့်ရန် အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ အွန်လိုင်းတွင်ဖြစ်သော်လည်း ခရက်ဒစ်ဝယ်ရန် သမားရိုးကျစနစ်များလည်း ရှိပါသည်။ အောက်ပါတို့ဖြင့် အားပြန်သွင်းနိုင်ပါသည်။
အလိုအလျောက် အားပြန်သွင်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှု
အချို့သော အော်ပရေတာများသည် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အနည်းငယ်ကွဲပြားသော်လည်း၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည် လက်ကျန်ငွေအား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းရန် ၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ကြသည်။
ထို့နောက်၊ စပိန်ရှိ အရေးကြီးဆုံးသော တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာများတွင် မိုဘိုင်းအားပြန်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်စေရန်အတွက် သင့်အား စာရင်းတစ်ခုချန်ထားခဲ့သည်-
Express TV ကို ပြန်လည်စတင်ပါ။
Postepay ကြိုတင်ငွေပေးကတ်ကို ငွေဖြည့်ပါ။
ကြိုတင်ငွေဖြည့် Telekom အားပြန်သွင်းခြင်း။
ယဉ်ကျေးမှု Nuri ကတ် အားပြန်သွင်းခြင်း။
Pepephone မိုဘိုင်းကို အားပြန်သွင်းပါ။
República Móvil တွင် မည်သို့ အားပြန်သွင်းရမည်နည်း။
လူအနည်းငယ်သာသိသော်လည်း ဘဏ်များသည် မိုဘိုင်းလ်လက်ကျန်များကို ဘေးကင်းစွာ အားပြန်သွင်းသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။ အမှန်တရားမှာ မိမိတို့၏ဖောက်သည်များအတွက် အဆိုပါငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေမည့် အဖွဲ့အစည်းများ ပိုများလာကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုကို ATM စက်များ၊ ဘဏ်ရုံးများ သို့မဟုတ် ဘဏ်၏ပလပ်ဖောင်းဝဘ်ဆိုဒ်မှ ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် အိမ်မှထွက်ခွာရန်မလိုအပ်ပါ။
စပိန်ရှိ ရိုးရာဘဏ်များသည် ဤဝန်ဆောင်မှုကို အချိန်အတော်ကြာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ သို့သော်လည်း အခြားသော ဘဏ်ငယ်များသည် ဤနည်းပညာကို ၎င်းတို့၏ စနစ်တွင် ထည့်သွင်းခြင်းမရှိသေးပေ။ သင့်မိုဘိုင်းလက်ကျန်ငွေကို ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းရန် အလုံခြုံဆုံးဘဏ်များ အောက်တွင် ကြည့်ပါစို့။
ဘဏ်အများစုသည် မိုဘိုင်းလ်ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူ၊ သင်သည် သင်၏ဆဲလ်ဖုန်း၏ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှ သင်ဘယ်ရောက်နေသည်ဖြစ်စေ သင့်လက်ကျန်ငွေကို ပြန်လည်အားပြန်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ဤပုံစံဖြင့် အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် မိုဘိုင်းအော်ပရေတာများစာရင်းသည် အလွန်ကျယ်ပြန့်သောကြောင့် မည်သူမျှမကျန်တော့ပါ။
စပိန်ပြင်ပရှိ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကို အားပြန်သွင်းပါ။
ယခုအခါ စပိန်ပြင်ပရှိ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကို အားပြန်သွင်းခြင်းသည် အလွန်လွယ်ကူသည်။ စပိန်ပြင်ပသို့ ခရီးသွားသည့်အခါ ပြဿနာမရှိဘဲ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဤဝန်ဆောင်မှုကို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် စျေးကွက်တွင် မတူညီသော တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာများ ရှိပါသည်။
ထို့အပြင် သင့်တွင် အခြားနိုင်ငံများတွင် သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုရှိပါက၊ ယူရိုငွေပေးချေခြင်းဖြင့် လက်ကျန်ငွေကို ၎င်းတို့ထံ ပေးပို့နိုင်သည်။ နိုင်ငံခြားတွင် သင့်မိုဘိုင်းလ်ကို အားပြန်သွင်းရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ဝဘ်မှတစ်ဆင့် သင့်ကွန်ပြူတာသုံးခြင်း သို့မဟုတ် သင့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသို့ အက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အခြားနိုင်ငံများရှိ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများသို့ ခရက်ဒစ်ပေးချေနိုင်သည့် မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာများလည်း ရှိပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုတည်ရှိသည့်နေရာများ သို့မဟုတ် အဆောက်အအုံများမှာ- ခေါ်ဆိုမှုစင်တာများ၊ ကီအိုစများ၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဆိုင်များ။
သင်ချစ်ရသူနှင့်ဝေးကွာခြင်းသည် ခက်ခဲနိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိသော်လည်း ဆက်သွယ်ရေး၏ မှော်ဆန်မှုကြောင့် ၎င်းတို့နှင့် အလွန်နီးကပ်သည်ဟု ခံစားနိုင်သည်။ ဤတွင် သင့်ချစ်ခင်ရသူများနှင့် အဆက်အသွယ်မပြတ်စေရန် ရွေးချယ်စရာများစွာကို သင့်အားပြသထားသည်။
ပီရူးမှ မိုဘိုင်းကို အားပြန်သွင်းပါ။
ချီလီမှ မိုဘိုင်းကို အားပြန်သွင်းပါ။
Telcel မိုဘိုင်းကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ အားပြန်သွင်းပါ။
Suop မိုဘိုင်းကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ အားပြန်သွင်းပါ။
မိုဘိုင်း Movilnet ငွေဖြည့်ပါ။
မိုဘိုင်းကို အားပြန်သွင်းရန် အခြားနည်းလမ်းများ
သင့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း လက်ကျန်ငွေကို နေ့စဉ် အားပြန်သွင်းရန် ရွေးချယ်မှုများသည် ပိုများသည်။ တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာများသည် သင့်အား ကွန်ရက်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိသောအခါတွင် မိုဘိုင်းအားပြန်သွင်းရန် မတူညီသောနည်းလမ်းများကို ပေးဆောင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မတူညီသော တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာများအတွက် ငွေပြန်သွင်းသည့်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်သည့် တရားဝင်အေးဂျင့်များ သို့မဟုတ် သင်ကြိုတင်ငွေပေးကတ်များဝယ်ယူနိုင်သည့် စတိုးဆိုင်များ။
ဤကြိုတင်ငွေပေးကတ်များသည် သင့်မိုဘိုင်းလိုင်းသို့ သင်ဝင်ရောက်လိုသော ငွေပမာဏကို ရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည့် ပမာဏအမျိုးမျိုးဖြင့် လာပါသည်။ ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ရိုးရှင်းသည်၊ နောက်ဘက်ရှိ activation ကုဒ်ကိုရှာပြီး အားပြန်သွင်းရန် ညွှန်ကြားချက်များကိုသာ လုပ်ဆောင်ပါ။
ဆိုင်များ၊ စာတိုက်များ သို့မဟုတ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးရုံးများ၊ အထူးစတိုးဆိုင်များ၊ ဓာတ်ဆီဆိုင်များ၊ စူပါမားကတ်များ၊ စူပါမားကတ်များ၊ ခရီးသွားအေဂျင်စီများ၊ ခေါ်ဆိုရေးစင်တာများ၊ စသည်တို့တွင် ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ သို့မဟုတ် ဝယ်ယူပါ။
၎င်းတို့၏အသုံးပြုသူများကိုခွင့်ပြုသည့်နှုန်းထားများရှိသည်။ ရှာဖွေကြည့်ရှုပြီး အကန့်အသတ်မရှိ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။. စျေးကွက်တွင် အကန့်အသတ်မဲ့ ဂစ်ဂါဗိုက် သို့မဟုတ် ဒေတာပမာဏ အများအပြားဖြင့် ကမ်းလှမ်းသည့် အော်ပရေတာများရှိပြီး အများစုမှာ တူညီသောရှာဖွေမှုမြန်နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ဤနှုန်းထားအမျိုးအစားများကို ပက်ကေ့ဂျ်များအတွင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ စပိန်တွင် အကန့်အသတ်မရှိ သို့မဟုတ် အကန့်အသတ်မရှိ လမ်းကြောင်းပြပေးသည့် ကုမ္ပဏီအချို့မှာ- Vodafone နှင့် Yoigo. အကောင်းဆုံးကတော့ ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ အဲဒါတွေကို သင်သုံးနိုင်တာပါ။
၎င်းတို့၏ နှုန်းထားများမှာ အကန့်အသတ်မရှိသော်လည်း အရေအတွက်များသော အော်ပရေတာများလည်း ရှိပါသည်။ အကန့်အသတ်မရှိနီးပါး gigs များ တစ်လလုံး အေးအေးဆေးဆေး သွားလာပါ။ ထိုကုမ္ပဏီများထဲတွင်- Movistar၊ Orange၊ Simyo၊ Lowi၊ MásMóvil နှင့် República Móvil.
ရရှိနိုင်သောနှုန်းထားများကြားမှ ဈေးနှုန်းများသည် တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီမှ ပေးထားသည့် အချက်အလက်အတိုင်း ကွဲပြားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အကန့်အသတ်မှ အကန့်အသတ်မရှိ ရှာဖွေကြည့်ရှုမှုအထိအထိ ပါဝင်သည်။ 50 Gb. အင်တာနက်ကို အပြင်းအထန်အသုံးပြုသော သုံးစွဲသူများအတွက် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု။